9 47 25 N 74 46 57 W 9.790290 N 74.782440 W 9.790290 - 74.782440 Plato dia tanàna ao amin ny departamentan i Magdalena ao Kolombia. Ny isam - ponina
Ihorombe no misy ny tangoron - tendrombohitr i Isalo. Midadasika ao koa ny platô Ihorombe ao andrefana. Ny tapany atsimon ny tangoron - tanedrombohitra Andringitra
ankehitriny ary tamin io firoky io no nanoratan ireo mpanoratra toa an - dry Platô sy Aristophanes. Misy zavatra tsy ampy anatin ity fizaràna ity. Ilaina mandray
grika hoe θεολογία theologia dia nampiasain ilay filôzôfa grika atao hoe Platô amin ny dikany ara - bakiteny hoe resaka momba ny andriamanitra na resaka
taozavatra na mpanamboatra Tamin ny taonjato faha - 4 dia nihevitra i Platô tao amin ny boky nosoratany atao hoe Τίμαιος Timaios fa ny antony voalohan izao